Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha PE - Warshadda dhalada ee Shiinaha
Ciyaaraha Dibedda Dhalo Biyo La-qaadan Karo
Kani waa dhalada biyaha isboortiga banaanka ku habboon ee jawiga u wanaagsan ee BAP, oo leh giraan la qaadan karo oo ku jirta afka dhalada, taas oo ay fududahay in la qaado.
Fitness Eco Dhalo Biyo tayo sare leh oo saaxiibtinimo leh
Dhalada biyaha isboortiga ee balaaran oo balaaran oo 1000ml ah, oo ka samaysan qalab tayo sare leh oo deegaanka u fiican, waxay ku haboontahay muuqaalo taxane ah sida jir dhiska, buurta fuulista, jimicsiga, iwm.
Bannaanka Cayaaraha Biyaha Biyaha Caaga ah
2500ml dhalada isboortiga ee awooda weyn. Iyada oo leh gacan qaadis la qaadan karo, oo miisaan leh oo waara. Naqshadeynta daboolka, fududahay inla furo. Kuu ogolaanayaa inaad ku shaqeyso hal gacan inta lagu jiro jimicsiga. Gudaha waxaa lagu qalabeeyaa shaandhada heerka-cuntada, iyo waxyaabaha bilaashka ah ee deegaanka BPA-ga ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ilaaliso dabeecadda intaad ku dhowdahay dabiicadda.
Nadiifi Dhalada Biyaha BPA Bilaash
Hadday tahay nolol maalmeedka, safarka magaalooyinka, safarka fasaxa ama cayaaraha banaanka. Dhammaantiin waxaad u baahan tihiin baahi fuuq maalinle ah, sidaa darteed qalab cabbitaan ku habboon ayaa si gaar ah muhiim u ah. Awood dhexdhexaad ah oo ah 1500ml, gacmeed la qaadan karo, furitaan ballaaran oo si fudud loogu buuxinayo loona nadiifiyo. Dhalada noocaas ah shaki la'aan waa xulashada ugu fiican.
Dhalada Biyaha Caaga ah
Jidh quruxsan oo caato ah, awood dhexdhexaad ah oo ah 1500 ml, biiyaha nuugista biyaha ee loo qaadi karo cabitaanka, iyo silikoon xarkaha ku xiran daboolka dhalada. Faahfaahin kasta oo naqshadeynta ah ayaa ku siin doonta habboon jimicsigaaga. Hadday tahay orod, baaskiil, fuulid, ama safar. Waxaad ku shaqeyn kartaa hal gacan oo biyo ayaad ku buuxin kartaa wakhti kasta.